दैनिक प्रार्थनाको आवश्यकता - साँचो बाइबल सिद्धान्त
अक्टोबर २, २०२१ फ्रेबुअरी २७, २०२१ द्वारा प्रकाशक
साँचो क्रिश्चियन जीवन र ईसाई काम, परमेश्वर बिना असम्भव चीजहरू हुन्। हामीलाई प्रार्थनाको जवाफ चाहिन्छ। उदाहरणको लागि: जबसम्म प्रभुले हामीमा परिवर्तन गर्दैन - हाम्रो हृदय पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैन।
“के इथियोपियालीले आफ्नो छाला परिवर्तन गर्न सक्छ, कि चितुवाले आफ्नो दाग? त्यसोभए तिमीहरूले पनि असल गर्न सक्छौ, जुन खराब गर्न बानी परेको छ।” ~ यर्मिया १३:२३
हामी हाम्रो भौतिक गुणहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। त्यसोभए हामीले हाम्रो हृदयको आध्यात्मिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्छौं भनेर किन सोच्ने? केवल परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा यो गर्न सक्नुहुन्छ।
र जबसम्म प्रभुले परमेश्वरको घर बनाउनुहुन्न, जुन परमेश्वरका मानिसहरूको आत्मिक भेला हो: गलत प्रकारका मानिसहरू पूजामा भेला हुनेछन्।
"परमप्रभुले घर बनाउनुभएन भने, तिनीहरूले निर्माण गर्ने व्यर्थको परिश्रम गर्छन्: परमप्रभुले सहरको रक्षा नगरी, पहरेदार ब्यूँझन्छ तर व्यर्थमा।" ~ भजनसंग्रह १२७:१
"तिमीहरूलाई थाहा छ कि परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ: उहाँले नै हामीलाई बनाउनुभएको हो, हामी आफैले होइन। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौं।” ~ भजनसंग्रह १००:३
फलस्वरूप, हामी आफैले यी मध्ये कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हुनाले, हामीले दिनहुँ कसरी प्रार्थना गर्ने, र परमेश्वरको कृपा र मद्दतको लागि बिन्ती गर्न सिक्नुपर्छ! र यदि हामी एक साँचो दैनिक प्रार्थना गर्न चाहन्छौं जहाँ परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, हामीले पहिले नै पश्‍चात्ताप गरिसकेका हुनुपर्छ र हाम्रा पापहरू त्याग्नुपर्छ।
"अब हामी जान्दछौं कि परमेश्वरले पापीहरूको सुन्नु हुन्न, तर यदि कोही मानिस परमेश्वरको उपासक हुन्छ, र उहाँको इच्छा पूरा गर्छ भने, उसले उसको कुरा सुन्छ।" ~ यूहन्ना ९:३१
तर ध्यान दिनुहोस्, झूटो ईसाई धर्मले दैनिक प्रार्थनाको अर्थ सिकाउँछ: "हामी हरेक दिन पाप गर्छौं, र त्यसैले हरेक दिन क्षमा चाहिन्छ।" त्यसैले दिनहुँ हामीले हाम्रा पापहरूको लागि येशू ख्रीष्टको बलिदानको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ।
तर दैनिक प्रार्थना फेरि क्रुसमा येशू ख्रीष्टको दैनिक बलिदान हुनु हुँदैन! दुःखको कुरा आजका अधिकांश तथाकथित क्रिस्चियन धर्महरूले अनिवार्य रूपमा केमा विश्वास गर्छन्: येशू ख्रीष्टको दैनिक बलिदान। तर त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको योजना कहिल्यै भएन।
"यसैकारण ख्रीष्टको सिद्धान्तका सिद्धान्तहरू छोडेर, हामी पूर्णतामा जाऔं; मरेका कामहरूबाट पश्‍चात्ताप गर्ने, र परमेश्‍वरप्रतिको विश्‍वास, बप्तिस्माको सिद्धान्त, र हातमा हात राख्ने, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त न्यायको जग फेरि नराख्नु। र भगवानले अनुमति दिनुभयो भने हामी यो गर्नेछौं। किनकि यो असम्भव छ कि जो एक पटक प्रबुद्ध भएका थिए, र स्वर्गीय वरदानको स्वाद लिएका थिए, र पवित्र आत्माको सहभागी बनाइएका थिए, र परमेश्वरको असल वचन र आउने संसारका शक्तिहरूको स्वाद लिएका थिए, यदि तिनीहरू पतन हुनेछन्। टाढा, पश्चात्तापमा तिनीहरूलाई पुन: नवीकरण गर्न; तिनीहरूले परमेश्‍वरको पुत्रलाई फेरि क्रूसमा टाँगेर उहाँलाई खुल्ला शर्ममा पारेको देखेर।” ~ हिब्रू ६:१-६
तपाईंले आफ्ना पापहरूद्वारा येशू ख्रीष्टलाई दिनहुँ शर्ममा पार्न सक्नुहुन्न, र उहाँले तपाईंको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दैनिक बलिदान हामी हुनुपर्छ: जसरी हामी दैनिक क्रस बोक्छौं र उहाँको पाइलामा पछ्याउँछौं।
"अनि उहाँले ती सबैलाई भन्नुभयो, यदि कोही मानिस मेरो पछि आउँछ भने, उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, र दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्।" ~ लूका ९:२३
पुरानो नियममा पनि, परमेश्वरका मानिसहरू हरेक बिहान र हरेक साँझ प्रार्थनाको लागि भेला हुनेछन्, एकै समयमा गरिएको दैनिक बलिदानसँग पहिचान गर्न। विहान र साँझको बलिदान व्यवस्थाले तोकेको थियो। तर प्रार्थनाको लागि भेला भएका मानिसहरू, प्रार्थनाको लागि बोझ भएकाहरूले मात्र गरेका थिए। किनभने प्रार्थना भनेको समयको बर्बादी हो, यदि मानिसहरूसँग यसको लागि हृदयदेखि बोझ छैन, र यसमा कुनै बलिदान प्रेम छैन।
“अनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई भन्‍नू, यो आगोद्वारा चढाइएको भेटी हो जुन तिमीहरूले परमप्रभुलाई चढाउनेछौ। एक वर्षका दुईवटा थुमाहरू दिनदिनै निष्कपट होमबलिको निम्ति चढाउनु पर्छ। एउटा थुमा तिमीले बिहान अर्पण गर्नू, र अर्को थुमा तिमीले बेलुका अर्पण गर्नू।" ~ गन्ती 28:3-4
पुरानो नियममा दैनिक प्रार्थनाको यो समय, जहाँ मानिसहरूले बलिदानको साथ पहिचान गर्थे जब तिनीहरूको प्रार्थना माथि जाँदै थियो, इस्राएलको आध्यात्मिक जीवनको लागि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो। तिनीहरूको इतिहासको सबैभन्दा कालो समय थियो जब एक विदेशी शत्रुले तिनीहरूबाट दैनिक बलिदान र प्रार्थना खोसेको थियो।
“हो, उसले मेजबानको राजकुमारसम्म पनि आफूलाई ठूलो बनायो, र उहाँद्वारा दैनिक बलिदान हटाइयो, र उहाँको पवित्रस्थानको स्थानलाई फ्याँकियो। अनि अपराधको कारणले उसलाई दैनिक बलिदानको विरुद्धमा एउटा सेना दिइयो, र यसले सत्यलाई भुइँमा फ्याँकिदियो। र यसले अभ्यास गर्यो, र समृद्ध भयो।" ~ दानियल ८:११-१२
र पुरानो नियममा, व्यक्तिहरूको लागि पनि, तिनीहरूको आत्मिक जीवन प्रार्थनामा निर्भर थियो। डेभिडले यसलाई यसरी व्यक्त गरे:
"साँझ, र बिहान, र दिउँसो, म प्रार्थना गर्नेछु, र ठूलो स्वरले रुनेछु: र उहाँले मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ।" ~ भजनसंग्रह ५५:१७
दानियलको लागि प्रार्थना यति आलोचनात्मक थियो कि उनी आफ्नो भौतिक जीवनलाई खतरामा पार्न इच्छुक थिए, कि उसले आफ्नो प्रार्थना जीवन जारी राख्न सक्थ्यो। त्यसोभए जब राजाले साँचो प्रार्थना गर्न मृत्युको धम्की दिने कानूनमा हस्ताक्षर गरे: दानियलले सधैं जस्तै प्रार्थना गरे।
“अब जब दानियलले त्यो लेखमा हस्ताक्षर भएको थाहा पाए, ऊ आफ्नो घरमा गयो। र उहाँको झ्यालहरू यरूशलेमतिर खोलिएको उहाँको कोठामा, उहाँले दिनको तीन पल्ट घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो, र उहाँको परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो, जसरी उहाँले पहिले गर्नुहुन्थ्यो।” ~ दानियल ६:१०
जब येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रार्थनालाई मानिसहरूको आध्यात्मिक जीवनको लागि यति महत्त्वपूर्ण ठान्नुभयो, कि उहाँले मन्दिर भित्रको प्रार्थनाको पवित्रता उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरूलाई शारीरिक रूपमा बाहिर निकाल्नुभयो।
"अनि येशू परमेश्वरको मन्दिरमा जानुभयो, र मन्दिरमा बेच्ने र किन्ने सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो, र पैसा साट्नेहरूका टेबुलहरू र ढुकुरहरू बेच्नेहरूका सिटहरू पल्टाउनुभयो, र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस्तो लेखिएको छ, मेरो घरलाई प्रार्थनाको घर भनिनेछ। तर तिमीहरूले यसलाई चोरहरूको ओडार बनाएका छौ।” ~ मत्ती २१:१२-१४
आज परमेश्वरका नयाँ नियमका मानिसहरू, व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा, प्रभुको मन्दिर हो। हामी प्रार्थनाको घर हुनु पर्छ। र नयाँ नियमका प्रेरितहरू र प्रभुका चेलाहरूले गरे जस्तै, हामीलाई पनि हरेक दिन प्रार्थनाको समय चाहिन्छ।
"आत्मामा सबै प्रार्थना र बिन्तीका साथ सधैं प्रार्थना गर्दै, र सबै सन्तहरूका लागि सम्पूर्ण लगनशीलता र बिन्तीसँग त्यसलाई हेर्दै" ~ एफिसी 6:18
प्रार्थना भनेको हामीले अरूबाट देखिने वा अरूले हामीबाट अपेक्षा गरेको कारणले होइन। यो हामीले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम र धन्यवादको कारणले गर्ने काम हुनुपर्छ। र किनभने हामीसँग विशेष गरी अरूको आवश्यकताको लागि हार्दिक बोझ छ।
"अनि जब तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईं कपटीहरू जस्तै हुनुहुँदैन: किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र गल्लीका कुनाहरूमा उभिएर प्रार्थना गर्न मन पराउँछन्, ताकि तिनीहरू मानिसहरूले देखून्। साँच्चै म तिमीहरूसामु भन्दछु, तिनीहरूको इनाम छ। तर तिमी, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, आफ्नो कोठरीमा पस, र जब तिमीले आफ्नो ढोका बन्द गर्छौ, तिम्रो बुबालाई प्रार्थना गर जो गोप्य छ। र गुप्तमा देख्‍नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।” ~ मत्ती ६:५-६
साथै दोहोरिने र जपको गुच्छाको साथ प्रार्थना नगर्नुहोस्। यहाँ पृथ्वीमा कसैसँग तपाईंले यसरी कुरा गर्नुहुन्न। त्यसोभए हामीले किन परमेश्वरसँग यसरी कुरा गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ?
“तर जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, अन्यजातिहरूले जस्तै व्यर्थ दोहोरिने कुराहरू प्रयोग नगर्नुहोस्: किनभने तिनीहरू सोच्छन् कि तिनीहरूको धेरै बोल्दा सुनिनेछ। यसकारण तिमीहरू तिनीहरूजस्तै नबन, किनकि तिमीहरूले उहाँसँग सोध्नु अघि नै तिमीहरूका बुबाले तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनी जान्नुहुन्छ।” ~ मत्ती ६:७-८
कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने थाहा छ। तर वास्तविकता कहिलेकाँही चीजहरू हो जुन हामीलाई लाग्छ हामीलाई चाहिन्छ, हामी गर्दैनौं। र अक्सर त्यहाँ अन्य चीजहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले हामीलाई वास्तवमा के चाहिन्छ भनेर परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा छ भनेर हामीले आभारी हुनुपर्छ। अनि हामीले उहाँलाई प्रार्थनामा व्यक्त गर्नुपर्छ।
"र हामी उहाँमा यो विश्वास छ कि, यदि हामीले उहाँको इच्छा अनुसार केहि माग्यौं भने, उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ: र यदि हामीलाई थाहा छ कि उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, हामी जे सोध्छौं, हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग बिन्तीहरू छन्। उसलाई चाहियो।" ~ १ यूहन्ना ५:१४-१५
र यसैले सबैभन्दा राम्रो प्रार्थना सधैं परमेश्वरको इच्छामा पेश गरिएको हो। त्यो कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुन सक्छ। किनभने प्रभु येशू बगैँचामा प्रार्थना गरिरहनुभएको बेला उहाँलाई आफ्नो प्रार्थना बुबालाई सुम्पन धेरै गाह्रो थियो।
"अनि उहाँ तिनीहरूबाट ढुङ्गाको कास्टको बारेमा पछि हट्नुभयो, र घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो, "पिता, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो कचौरा मबाट हटाउनुहोस्: यद्यपि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईंको इच्छा पूरा होस्।" ~ लूका २२:४१-४२
बाबाको इच्छा पूरा भएकोले आज हामी मुक्ति पाउन सक्छौं। र यसैले यदि हामीले हाम्रो प्रार्थनामा आफ्नो भन्दा पिताको इच्छालाई अनुमति दियौं भने, अचम्मको कुराहरू हुन सक्छ!
"अब हामीमा काम गर्ने शक्ति अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै भन्दा धेरै गर्न सक्ने उहाँलाई" ~ एफिसी ३:२०
त्यसोभए हामी भित्र कुन प्रार्थना शक्तिले काम गरिरहेको छ? के यो हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्ति हो? वा यो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान प्रेमको शक्ति हो? हाम्रा मुक्तिदाताको बलिदान प्रेम उद्देश्यमा हाम्रा प्रार्थना अनुरोधहरू पेश गरौं!
"त्यसै गरी आत्माले पनि हाम्रा दुर्बलताहरूलाई मद्दत गर्दछ: किनकि हामीले केको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छैन; तर आत्माले आफैंले उच्चारण गर्न नसकिने सुस्केराका साथ हाम्रो लागि मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। अनि हृदयको खोजी गर्नेले आत्माको दिमाग के हो भनेर जान्नुहुन्छ, किनकि उसले परमेश्वरको इच्छाबमोजिम सन्तहरूको लागि मध्यस्थता गर्छ। र हामी जान्दछौं कि सबै चीजहरू एकसाथ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि भलाइको लागि काम गर्दछ, उहाँको उद्देश्य अनुसार बोलाइएकाहरूको लागि। ~ रोमी ८:२६-२८
प्रायः सबैभन्दा शक्तिशाली प्रार्थनाहरू ती हुन् जुन यस्तो भारी हृदयबाट बनाइन्छ, जुन शब्दहरू व्यक्त गर्न सकिँदैन जुन हामीले महसुस गरिरहेका छौं। र ती समयमा, परमेश्वरले उत्तम जवाफ बुझ्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ।
अन्तमा, शैतानले हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिने बाटोमा चीजहरू राख्नको लागि छल नगरोस् भनेर हामी होसियार हुनुपर्छ। साँचो मसीहीहरू प्रार्थनामा सहमत हुन सक्षम हुनुपर्छ भनी परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रार्थनामा असहमति भनेको चर्चमा काम गर्ने परमेश्वरको शक्तिको लागि प्रमुख बाधाहरू मध्ये एक हो।
"त्यसै गरी, हे पतिहरू, तिनीहरूसँग ज्ञान अनुसार बस्नुहोस्, पत्नीलाई सम्मान दिनुहोस्, कमजोर भाँडाको रूपमा, र जीवनको अनुग्रहको उत्तराधिकारीको रूपमा; कि तिम्रो प्रार्थनामा बाधा नहोस्। अन्तमा, तिमीहरू सबै एक मनको होओ, एकअर्कालाई दयालु बनाउनुहोस्, दाजुभाइको रूपमा प्रेम गर्नुहोस्, दयालु बन्नुहोस्, विनम्र हुनुहोस्: नराम्रोको बदला नराम्रो, वा रेलिङको लागि रेलिङ: तर उल्टो आशीर्वाद; तिमीहरूलाई बोलाइएको हो भनी जान्दै, कि तिमीहरूले आशिष् पाउनेछौ।” ~ १ पत्रुस ३:७-९
आध्यात्मिक बलिदान प्रार्थना वेदी साँचो भाइबहिनीहरू बीचको विभाजनबाट मुक्त हुनुपर्छ।
“तेसैले यदि तिमी आफ्नो उपहार वेदीमा ल्याउँछौ, र तिम्रो भाइले तिम्रो बिरुद्धमा गरेको सम्झना छ; वेदीको सामुन्ने तिम्रो उपहार छोडिदेऊ, र तिम्रो बाटो लाग। पहिले तिम्रो भाइसँग मिलाप गर, र त्यसपछि आएर तिम्रो उपहार देऊ। ” ~ मत्ती ५: २३-२४
पेन्टेकोस्टको दिनमा परमेश्वरको शक्तिको सबैभन्दा शक्तिशाली अभिव्यक्तिहरू मध्ये एक भयो। र यो किन भयो: किनभने प्रेरितहरू र चेलाहरू प्रार्थनामा सहमत थिए!
"अनि जब पेन्टेकोस्टको दिन पूर्ण रूपमा आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा एक सहमतिमा थिए।" ~प्रेरित २:१
दुबै त्यस समयमा, र पछिको समयमा जब परमेश्वरको पवित्र आत्माको अर्को शक्तिशाली हल्लिएको थियो, साँचो इसाईहरू सतावटको खतरामा बाँचिरहेका थिए।
“अनि जब तिनीहरूले प्रार्थना गरे, तिनीहरू एकसाथ भेला भएका ठाउँ हल्लियो। र तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएका थिए, र तिनीहरूले साहसका साथ परमेश्वरको वचन बोले।" ~प्रेरित ४:३१
जब हाम्रो हृदय व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा सही ठाउँमा हुन्छ। धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँछ कि हामीसँग हाम्रो प्रार्थनाको साथ सिंहासनमा साहसपूर्वक आउने अधिकार छ!
"त्यसैले हामी साहसका साथ अनुग्रहको सिंहासनमा आऔं, ताकि हामीले दया प्राप्त गर्न सकौं, र खाँचोको समयमा मद्दत गर्नको लागि अनुग्रह पाउन सकौं।" ~ हिब्रू ४:१६
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपा र अनुग्रहद्वारा हामीले पाएको यो विशेष सुअवसरलाई हामीले कहिल्यै बेवास्ता नगरौं। येशूको नाममा प्रार्थना गर्ने सुअवसर!
“अनि तिमीहरूले मेरो नाउँमा जे माग्छौ, त्यो म गर्नेछु, ताकि पुत्रमा पिताको महिमा होस्। यदि तिमीहरूले मेरो नाउँमा केही माग्यौ भने, म गर्नेछु। यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गर। र म पितासँग प्रार्थना गर्नेछु, र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सान्त्वना दिनुहुनेछ, ताकि उहाँ तिमीहरूसँग सदासर्वदा रहनुहुनेछ।" ~ यूहन्ना १४:१३-१६
हामीले माग्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा, र हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा, र सबैभन्दा ठूलो कुरा जुन परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ: उहाँ आफै हुनुहुन्छ! त्यसोभए किन हामी आफ्नो आत्मलाई पूर्णतया परमेश्वरलाई दिन तयार हुँदैनौं? के हामी साँच्चै यो चाहन्छौं? त्यसोभए हामी उहाँलाई शुद्ध र बलिदान मायालु हृदयले सोधौं, र उहाँले पक्कै जवाफ दिनुहुनेछ!
"यदि तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल वरदानहरू दिन जान्दछौ भने: तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ?" ~ लूका ११:१३
र एकपटक हामीले प्रभुको आत्मालाई हाम्रो हृदयमा साँच्चै प्राप्त गरिसकेपछि, हामी हाम्रो जीवनको त्यो बलिदान दिनहुँ जारी राखौं, ताकि उहाँले हामीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, र हामीलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, राज्यको मुक्ति कार्यमा रोज्न सकून्। भगवान को।
कोटिहरु आध्यात्मिक सुरुवात ट्याग प्रार्थना, बलिदान पोस्ट नेभिगेसन
परामर्श र गवाही - उपदेश छैन